Burma Partnership » Institutional and Structural Governance Reforms Must Go Hand-in-hand With the 2015 Elections to Achieve Ethnic Equality
The report, “Elections for Ethnic Equality? A Snapshot of Ethnic Perspectives on the 2015 Elections” analyzes whether the 2015 elections will achieve the stated aspirations of ethnic communities and ethnic political parties – ethnic equality, self-determination andafederal system of governance. Given the structures of governance in Burma, as stipulated by the 2008 Constitution, the report finds that the 2015 elections will not achieve these goals.
The snapshot of the 2015 elections provides perspectives from Karen, Mon, Tavoyan, Pa-O, Shan, Kachin, Chin, Rakhine, Lisu, Lahu, Karenni and Intha community members and political parties. The report is based on wide range of interviews with 18 ethnic political parties contesting the 2015 elections and over 40 ethnic civil society organizations including youth groups, women’s groups, community development organizations, and political activists who are all active in ethnic nationality areas.
Burma Partnership found that there are two major impediments to achieving ethnic equality. One is that governance is highly centralized, with very little decision-making power over key issues that affect ethnic communities devolved to State and Region Parliaments. The second impediment to ethnic equality is the pervasive and far-reaching power of the Burma Army, from Union level Parliament through its 25% allocation of Members of Parliament and three key ministerial positions assigned to military personnel, as well as onaday to day administrative level, though the General Administration Department. The key document that institutionalizes these power structures is the 2008 Constitution, and as the military’s intransigence has shown, it is unwilling to change this.
“In the midst of the expectation and hype around the 2015 elections, it is vital to recognize the significance of the concurrent peace process,” said Khin Ohmar, Coordinator of Burma Partnership, “This is especially important given the inclusivity problems over signing the nationwide ceasefire agreement and the ongoing armed clashes in different ethnic areas.”
The stated aims of ethnic political parties and ethnic armed organizations are all broadly similar, but with different methods to achieve this. For ethnic political parties, it is within the institutional structures of governance, but for ethnic armed groups, it is outside these structures. The 2015 elections are much anticipated, but the report finds that for many ethnic communities, it is the peace process that garners as much, if not more, importance. While ethnic political parties’ participation in the 2015 elections provides opportunities, such as furthering their own development and institutionalization, and fosteringademocratic culture, by placing disproportionate focus and emphasis on the 2015 elections at the expense of the peace process could serve to neglect the aspirations of ethnic communities.
“When conducting the research for this report,afederal system of governance was stated time and time again by ethnic communities and ethnic political parties as the most fundamental political change that will benefit their lives,” said Alex Moodie, Advocacy and Research Officer at Burma Partnership, “this ties in with not just democratic elections, but the ongoing peace process.”
The report gives recommendations to the Government, to both ethnic and non-ethnic based political parties, as well as to the international community from the perspectives of the ethnic civil society and communities that contributed to the report. The most important recommendation is to immediately engage inaprocess to change the institutional and governance structures of the country- including the 2008 Constitution – to serve the needs of ethnic communities in Burma, not just in the context of the 2015 elections, but for the long-term future ofademocratic, federal Union.
The report was released at the Royal Rose Restaurant in Rangoon, Burma on9October, 2015. It was written and produced by Burma Partnership’s ‘Progressive Voice’ Policy Research Project.
Aung Khaing Min: +95 (0) 092623898829, akm@burmapartnership.org (Burmese, English)
Alex Moodie: +95 (0) 09780096440, alex@burmapartnership.org (English)
တိုင်းရင်းသားတန်းတူရေးအတွက် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရုံသာမက အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံပိုင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပိုင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုပါ တစ်ပြိုင်နက်တည်းလုပ်ဆောင်ရန်လို
(ရန်ကုန်မြို့ – ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့) မြန်မာနိုင်ငံတွင် အများမျှော်လင့်စောင့်စားနေကြသည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ဆောင်နေကြသည့် အချိန်တွင် တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကျမှုများအား ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်နေသည့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံပိုင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပိုင်းဆိုင်ရာ အဓိကကျသည့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများအား မမေ့လျော့ရန် လိုအပ်နေကြောင်း မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့ (Burma Partnership) မှ ယနေ့ထုတ်ပြန် သည့် အစီရင်ခံစာ၌ ဆိုထားပါသည်။
“တိုင်းရင်းသားတန်းတူရေးကို ရွေးကောက်ပွဲမှ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မလား – ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ အမြင်သဘောထားများ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း စုစည်းတင်ပြချက်” ဟုအမည်ရသည့် အစီရင်ခံစာ၌ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် တိုင်းရင်းသားလူထုအသိုင်းအ၀ိုင်းတို့မှ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တိုင်းရင်းသားတန်းတူရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နှင့် ဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် စသည့် တိုင်းရင်းသားတို့၏ မျှော်မှန်းချက် များ ရရှိနိုင်စေရန် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှ ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင် မပေးနိုင်အား သုံးသပ်ဖော်ပြထားပါသည်။
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး စိုင်းညွန့်လွင်က “၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာ အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဆိုတာ သံသယရှိစရာ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်လည်း တိုင်းရင်းသားအားလုံးအတွက် နှစ်ပေါင်းဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ နှက်နှက်ရှိုင်းရှိုင်း ဖြစ်တည်နေခဲ့တဲ့ အခက် အခဲအကျပ်အတည်းတွေ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ မညီမျှမှုတွေနဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ အာဏာကြီးစိုးမှု နှစ်ရှည်ကြာခဲ့တာတွေ ကိုတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုထဲက ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုဟာ တစ်ပြိုင်နက်တည်း သွားရမယ့်ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု အစီရင်ခံစာမိတ်ဆက်ပွဲ၌ ပြောဆိုခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် တစေ့တစောင်းသုံးသပ်ချက်တွင် ကရင်၊ မွန်၊ ထားဝယ်၊ ပအိုဝ်း၊ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်း၊ ရခိုင်၊ လီဆူး၊ လားဟူ၊ ကရင်နီနှင့် အင်းသားတိုင်းရင်းသားလူထုကိုယ်စားလှယ်များနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ အမြင်များအား ဖော်ပြထားပါသည်။ လူငယ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ နေရာဒေသများတွင် လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်နေကြသည့် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၄၀ ကျော် နှင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီ ၁၈ ခုတို့နှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးခဲ့သည့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ယခုအစီရင်ခံစာအား ရေးသားပြုစုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
တိုင်းရင်းသားတန်းတူရေးအတွက် အဓိကအဟန့်အတား နှစ်ခု ရှိနေကြောင်း မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သူများအဖွဲ့မှ တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ပထမအဟန့်အတားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုဦးစီးချုပ်ကိုင်မှုဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသားများနှင့် ပတ်သက်သည့် အဓိကကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်အာဏာအား ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးဆိုင်ရာ လွှတ်တော်များသို့ အနည်းငယ်မျှသာ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ထားသည်။ တိုင်းရင်းသားတန်းတူရေးအတွက် ဒုတိယအဟန့် အတားမှာ ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် သီးသန့်ချန်လှပ်ပေးထားရသော အမတ်နေရာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းမှစတင်ကာ အရေးပါ သည့် ၀န်ကြီးဌာနသုံးခုအား စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက် ထားပေးခြင်းနှင့် အောက်ခြေအဆင့်အထိ နေ့တဓူဝ အုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများအား အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှတဆင့် ထိန်းချုပ်ထားခြင်းအထိ မြန်မာစစ်တပ်၏ လက်တံ ရှည်ရှည် ထိုးဖောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခွင့်ပင် ဖြစ်သည်။ စစ်တပ်၏ ထိုကဲ့သို့ ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းချုပ်နိုင်ခွင့်အာဏာကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၌ အခိုင်အမာပြဌာန်းပေးအပ်ထားပြီး ထိုအခြေခံဥပဒေအား ပြင်ဆင်လိုစိတ်မရှိကြောင်းကို အနည်း ငယ်မျှပင် လိုက်လျောမှုမရှိသည့် စစ်တပ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များက အခိုင်အမာပြသနေပါသည်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို အလွန်အမင်း အမွှမ်းတင် အကောင်းမြင် မျှော်လင့်နေကြတာနဲ့အမျှ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ တစ်ပြိုင်တည်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ ထူးခြားမှုကိုလည်း မမေ့ဖို့အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားဒေသ အများအပြားမှာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေ ဆက်ဖြစ်နေတဲ့အပြင် တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးရေးမှာ အားလုံးပါဝင်နိုင်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ပြဿနာတွေအရပါ ဒီငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို မေ့လျော့မနေဖို့ အရေးကြီးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးမှူး ဒေါ်ခင်ဥမ္မာမှ ပြောပါသည်။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများက ဖွင့်ဟ ထုတ်ဖော်ထားကြသည့် ရည်မှန်းချက်များသည် အခြေခံအရ ဆင်တူနေကြသော်လည်း ထိုရည်မှန်းချက်များ ရရှိရန် အတွက် လုပ်ဆောင်ကြသည့် နည်းလမ်းများမှာမူ ကွဲပြားကြပါသည်။ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများအတွက် နည်းလမ်း မှာ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအတွင်းမှ လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက်မူ ထိုဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ပုံ၏ပြင်ပမှ လုပ်ဆောင်သည့်နည်းလမ်း ဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအား အများမှ မျှော်လင့်စောင့်စား နေကြသော်လည်း အစီရင်ခံစာတွေ့ရှိချက်များအရမူ ရွေးကောက်ပွဲထက် ပိုမိုအရေးမကြီးလျင်သော်မှ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုအများစုအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အား ပိုမိုစိတ်ဝင်စား အာရုံစိုက်ကြကြောင်း ပေါ်လွင်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများအတွက် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ယဉ်ကျေးမှုကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း၊ ၎င်းတို့ပါတီများ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ပိုင်းအား ပိုမိုခိုင်မာစေခြင်းတို့ကဲ့သို့ အခွင့်အလမ်းကောင်းများရရှိစေသော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အား မျက်ကွယ်ပြုကာ ရွေးကောက်ပွဲအား အလွန်အမင်းအာရုံစိုက်ပါက တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုများ၏ ဆန္ဒနှင့် မျှော်မှန်းချက် များအား ဥပေက္ခာပြုရာ ရောက်သွားပါလိမ့်မည်။
“ဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကသာ သူတို့တွေရဲ့ နေထိုင်မှုဘ၀တွေကို အကျိုးပြုစေမယ့် အခြေခံအကျဆုံး နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့ တိုင်းရင်းသားလူထုအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေကရော တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကပါ အစီရင်ခံစာအတွက် သုတေသနလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေချိန်တလျှောက်လုံး အကြိမ်ကြိမ် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအချက်က ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲနဲ့သာမက လက်ရှိသွားနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပါ ဆက်စပ်နေပါတယ်” ဟု မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့မှ လှုံ့ဆော်စည်းရုံးရေးနှင့် သုတေသနအရာရှိ Alex Moodie မှ ဆိုပါသည်။
အစီရင်ခံစာအတွက် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည့် တိုင်းရင်းသားလူထုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူ လူထုများ၏ အမြင်များအပေါ်အခြေခံထားသည့် အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်များအား တိုင်းရင်းသားအခြေပြုနိုင်ငံရေးပါတီများ နှင့် တိုင်းရင်းသားအခြေမခံသောနိုင်ငံရေးပါတီများ၊ မြန်မာအစိုးရနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းများသို့ ဤအစီရင်ခံစာ၌ တင်ပြတိုက်တွန်းထားပါသည်။
အရေးအကြီးဆုံးအကြံပြုတိုက်တွန်းချက်မှာ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေအတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေး ရေရှည်အနာဂတ်အတွက်ပါ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထု၏ လိုအပ်ချက်များအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အပါအ၀င် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အမြန်ဆုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းချက် ဖြစ်သည်။
အစီရင်ခံစာအား ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမ၌ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသည်။ ဤအစီရင်ခံစာအား မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့၏ ‘ရှေ့ပြေးအသံ’ မူဝါဒသုတေသန စီမံကိန်းမှရးသားပြုစုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အောင်ခိုင်မင်း akm@burmapartnership.org ၊(မြန်မာနှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ)၊ ဖုန်း(+၉၅) ၉၂၆၂၃၉၈၈၂၉
Alex Moodie alex@burmapartnership.org ၊(အင်္ဂလိပ်ဘာသာ)၊ ဖုန်း(+၉၅) ၉၇၈၀၀၉၆၄၄၀
Tags: 2015 Elections, ASEAN, Burma Partnership, Chin State, Ethnic Nationalities, Human Rights, Kachin State, Karen State, Military Regime, Shan Nationalities League for Democracy